ဖူး ရဲ့ လျို့ဝှက် ချက် – Hlataw.com
မောင်မောင်မျိုးတစ်ယောက်တော်တော်ပျော်နေသည်။အခုချိန်တွင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ စိတ်အချမ်းသာဆုံးလူစာရင်း ကောက်လိုက်ရင် သူထိပ်ဆုံးနားလေးကပင် ပါလာနိုင်သည်။ တကယ်ပေါက်ရင်တောင် အိမ်တစ်လုံးဝယ်လို့ မရနိုင်တဲ့ အောင်ဘာလေ သိန်း၁၅၀၀ ထီပေါက်တာထက်ပင်ပျော်နေရသည်ဟု ဆိုလျှင် လွန်အံ့မထင်။ အကြောင်းကား သူအလွန်အမင်းစွဲလမ်း ချစ်ခင်ရပါသော…….. ဖူးဖူး ဟုသူအမြတ်တနိုးခေါ်ဆိုအပ်သော မေမီဖူးဖူး ထံမှ ချစ်အဖြေ ကို အံ့သြတကြီး လက်ခံရရှိလိုက်သည်မှာ နာရီပိုင်းမျှသာရှိသေးသောကြောင့်ပင်။ အံ့သြတကြီး ဟူသောစာလုံးကိုရှင်းပါအုံးမည်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ချစ်သူ မိန်းကလေးထံမှ ချစ်အဖြေ စကားပြန်ကြားရသည်မှာ ဘာမှအံ့သြလောက်စရာတော့မဟုတ်။ သို့သော် မောင်မောင်မျိုး မျှော်မှန်းခဲ့မိသော မေမီဖူးဖူးမှာ သူ့တသက်တာ မြင်ဖူးသမျှထဲတွင်….မော်ဒယ်၊ မင်းသမီးတမျှ လှပသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။ မောင်မောင်မျိုးကလည်း ရုပ်ရှိ ရေလျှံ ရှိုးကောင်းသူ တစ်ယောက်သာဆိုလျှင် အံ့သြစရာကိစ္စမဟုတ်သေး။ အနှီမောင်မောင်မျိုးမှာ သူလိုငါလို ရွက်ကြမ်းရေကျို ရုပ်ရည်သာပိုင်ဆိုင်သည်။ ငွေရေးကြေးရေးမှာလည်း အလကားနေရင်းသုံးနိုင်ဖြုန်းနိုင် နေသူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်။ ရူပါမလို ဗျူဟာသာလိုသည် ဆိုသော ဆရာ့ဆရာကြီးများလို တော်ကီအလွှတ်တွင် ဘော်လီကျွတ်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက် မဟုတ်မှန်းလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိနေပြီးသား။
ထို့ကြောင့် မေမီဖူးဖူး ဟူသော လူတကာဆွတ်ယူချင်သော ပန်းကလေးက မောင်မောင်မျိုးတည်းဟူသော သာမညောင်ည လူတစ်ယောက်ကို ပြန်လည်ချစ်ကြိုက်ခြင်းမှာ ကိုယ်တိုင် မကြုံရလျှင် ယုံနိုင်ဖွယ်တောင် မရှိသော ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေအဖြစ်အပျက်တစ်ခုသာ ဖြစ်နေ၏။ စင်စစ်သော် ဖူးဖူးမှာ မောင်မောင်မျိုးတို့ ကျောင်း၏အလှပဂေးစာရင်းဝင်တစ်ဦးပင်။ ဖူးဖူး၏ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းမျက်ဆံနက်နက်လေးများနှင့် အရုပ်ကလေးလို လှပ နုနယ် ချစ်စဖွယ်ကောင်းသော မျက်နှာလေးကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ပိန်ပိန်ပါးပါး သာရှိသော်လည်း မြန်မာဆန်ဆန် အကျီပုံဆန်းဆန်းလေးများအောက်မှ မို့မောက်ရုန်းကြွနေသော စနေနှစ်ခိုင်ကိုလည်းကောင်း၊ သိမ်သောခါးနှင့် လိုက်ဖက်လှသော တင်အိုးခပ်ကားကား လေးကိုလည်းကောင်း ငေးကြ ဆွေးကြ သက်ပြင်းချကြသော ကျောင်းသားထုမှာ ဒုနှင့်ဒေး ရှိချေ၏။ ထိုမျှမကသေး ကျောင်းအပြင် ကျူရှင် အလာတွင် တစ်ခါတရံဝတ်တတ်သော ရင်ဘတ်ဟိုက်ဟိုက် ဘလောက်စ်လေးများနှင့် ထဘီစကပ်အတွင်းမှ လှစ်ခနဲပေါ်ပေါ်လာတတ်သော ခြေသလုံးသားလေးများကြောင့် အချို့သောကျောင်းသားများမှာ ကျောင်းမှန်မှန်တက်ကာ စာကြိုးစားကြလေသတတ်။ ထို့ကြောင့်ပင် မောင်မောင်မျိုးမှာ ငါလိုလူဇမ္ဘူမှာရှိသေးရဲ့လားဟု လက်ခမောင်းခတ်မတတ်ပင် ၀မ်းသာလုံးဆို့နေရခြင်းဖြစ်လေသည်။ တကယ်တော့ ဖူးဖူးကို သူတိတ်တခိုးချစ်နေမိသည်မှာ ကြာလှပြီ။ ဒါကြောင့်လည်း သူငယ်ချင်းဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားကာ ဖူးဖူးအနားကပ်ခွင့်ရအောင် လုပ်ခဲ့သည်။ မာနမကြီးတတ်သော ဖူးဖူးက သူ့ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
မောင်မောင်မျိုး၏ အားသာချက်များကိုရှာကြံပြောရလျှင် အလိုက်သိခြင်း နှင့် သူတပါးကို နားလည်မှုပေးနိုင်ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မောင်မောင်မျိုးမှာ ချစ်သူခင်သူ မိတ်ဆွေမရှား……။သူချစ်နေသောဖူးဖူးအပေါ်ပိုရွေ့ပင် ဂရုတစိုက်ရှိမိသောကြောင့် ဖူးဖူးဟူသောပန်းကလေး သူ့လက်ထဲ ကြွေကျလာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူယုံကြည်မိလေသည်။ ချစ်သူဖြစ်ကာစရက်များတွင် မောင်မောင်မျိုးတစ်ယောက် တိမ်ပေါ်လမ်းလျှောက်နေရသလိုပင် ပျော်ရွှင်လှသည်။ တစ်ချို့သောသူများတကာ သမီးရည်းစားတွေလို ချက်ချင်း အခွင့်အရေးတန်းမယူ ချစ်သူချောချောလေးအား လက်ချင်းချိတ်ကာ နေရာအနှံ့လျှောက်သွားနေရခြင်းဖြင့် ပင် သူ့အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးစေခဲ့သည်။ ဟိုဟိုဒီဒီပန်းခြံလေးများထိုင်မိလျှင် နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးကြောင့် သစ်သီးနံ့လေးသင်းနေသော ဖူးဖူး၏ နှုတ်ခမ်းလေးများကို မရဲတရဲနမ်းမိလိုက်လျှင်ပင် ယောက်ျားသဘာဝ ဇာတ်လမ်းဆုံးသို့ရောက်လုမတတ် သူစိတ်လှုပ်ရှားရသည်။ မောင်မောင်မျိုးရည်းစားမထားဖူးဘူး မဟုတ် ထားဖူးသော်လည်း ဖူးဖူးလို ပထမတန်းစားလေးနှင့် ချစ်သူဖြစ်ရသောကြောင့် သူမိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်မိခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ရည်းစားဖြစ်ပြီး အတော်လေးကြာတော့ မောင်မောင်မျိုးအခက်အခဲတစ်ခုနှင့် ကြုံရသည်။ ဖူးဖူးကို ကြွေရုပ်လေးလို အလှထိုင်ကြည့်နေသော သူ့အားသူငယ်ချင်းအပေါင်းအဖော်များက အဆင့်တက်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းမြှောက်ပေးကြသည်။
သူကမိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်အချိန်လိုတယ် ဘာညာနှင့် ဖောရှော ပြောထားပေမဲ့ တကယ်တမ်း အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာ သူပင်။ ဒီလောက်လှသော ဖူးဖူးကို သူမအုပ်ချင်လို့မဟုတ်၊ ဖူးဖူး၏ အတွင်းကျသောခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို မမြင်ချင်လို့မဟုတ်ပေ။ အပြန်အလှန်အနေဖြင့် သူ၏ အတွင်းပစ္စည်းများကို ပြသရန် ရှက်နေမိခြင်းသာဖြစ်သည်။ တစ်ခြားယောက်ျားသားတို့ ဒါမျိုးစဉ်းစားချင်မှစဉ်းစားမည်ဖြစ်သောလည်း မောင်မောင်မျိုးက အတွေးလွန်တတ်သည်။ သူ၏ တီရှပ်ပွပွထူထူများဖြင့် မသိသာအောင်ဖုံးထားသော နံရိုးပြိုင်းပြိုင်း ဘော်ဒီကိုလည်းကောင်း၊ မဲနေသောဖင်ရှုံ့ရှုံ့လေးအားလည်းကောင်း၊ ယုတ်စွအဆုံး မိန်းမကိစ္စတွင်တောင် “တို့ကတော့ ရုပ်ကို မကြည့်နဲ့ -ီး လာကြည့် တသက်စွဲသွားစေရမယ်” ဆိုသော ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိ…သူကြားခဲ့ဖူးသော ကြိမ်းဝါးသံများလို လက်မထောင်နိုင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့နေနေသာသာ လူစဉ်မှီရုံလောက်သာ ရှိသော သူ့ဖွားဖက်တော်အားလည်းကောင်း…ဖူးဖူးသာမြင်သွား ရင် စိတ်ပျက်သွားမှာပဲဟု သူတွေးရင်း ရှက်နေမိသောကြာင့် သူတို့အချစ်ရေးကို ရှေ့ဆက်မတိုးမိခြင်းသာ ဖြစ်လေ၏။ ထိုသို့အရှက်သည်းသော မောင်မောင်မျိုးစဉ်းစားထားသည်က လက်ထပ်ပြီးမှဆိုလျှင် ဖူးဖူးတစ်ယောက် ရွေးချယ်စရာမရှိသောကြောင့် ပိုအဆင်ပြေမည်ဟု…။
သို့သော် သူငယ်ချင်းများက “မင့်မေ သောက်ခွေး ဟိုက မင့်အတည်ယူမယ်ဘယ်သူပြောတုန်း….. ခုလိုရည်းစားဖြစ်ရတုန်း အခွင့်သာခိုက်မှ မအုပ်ချင်လျှင် ဘာညာသာရကာ နေကြာကွာစိ” စသဖြင့် ပွားလွန်းမက ပွားကြလေသော် မောင်မောင်မျိုးကိုယ်တိုင် စိတ်ပါလာတော့သည်။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ကွာ ဆိုပြီး ဖူးဖူးအား ပူဆာမိတော့သည်။ “ဖူးရယ်…ကိုယ်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရရင်ကောင်းမယ်ကွာ” “ခုလည်းတွေ့နေရတာပဲကို ကိုရယ်…… ဘယ်သူတွေကလိုက်နှောက်ယှက်နေလို့တုန်း”“မဟုတ်ဘူးလေ……..နှစ်ယောက်ထဲ တနေရာမှာ စကားအေးဆေးပြောချင်တာကို ပြောတာ ဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာကွာ ““အမယ်…မသိရင်ခက်မယ်…….စကားပြောချင်တာက နဲနဲ…ဟွန်း” “ဟီး…ချစ်လွန်းလို့ပါဖူးလေးရယ်……ဖူးကကိုယ့်ကိုမချစ်ဘူးလားပြော……..” ထိုသို့တတ်သမျှမှတ်သမျှ နည်းများဖြင့် ချုပ်လေသောအခါ ဖူးဖူးလည်း မလိုက်ချင်သလိုလိုက်ချင်သလို နှင့် ဟိုတယ်အခန်းလေးတစ်ခုထဲသို့ပါလာရလေတော့သည်။ အဖြူရောင် ရင်စေ့အကျီ၊ အဖြူနှင့် မီးခိုးအပွင့်လေးများရောစပ်ထားသော ထဘီနှင့် လှချင်တိုင်းလှနေသော ဖူးဖူးတစ်ကိုယ်လုံးအား မောင်မောင်မျိုး သိမ်းကျုံးကြည့်လိုက်သည်။ ဖူးဖူးက ရှက်သွေးဖြာသောမျက်နှာလေးနှင့် ခေါင်းကိုငုံ့လိုက်စဉ် မောင်မောင်မျိုးက ခေါင်းအငုံမခံဘဲ လက်ဖြင့် ဆွဲယူကာ အနမ်းများကြာရှည်စွာပေးလိုက်လေသည်။
“အိ……အူးးးး….ဟူး…မောလိုက်တာကိုရာ….”ဖူးဖူး၏ပန်းသွေးရောင်နှုတ်ခမ်းလေးများကိုလွှတ်ပြီး လည်တိုင်ကျော့ကျော့ကို အနမ်းခြွေလိုက်စဉ် ဖူးဖူးထံမှ ညည်းသံလေးများထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အကျီကြယ်သီးလေးများကို တစ်ခုချင်း ညင်သာစွာ ဖြူတ်လိုက်ပြီးနောက် ပေါ်ထွက်လာသောဘရာအဖြူရောင်လေးကို ချွတ်မည်လုပ်တော့ ဖူးဖူးက အချွတ်မခံဘဲ လက်နှင့်ဖိအုပ်ထားသည်။ “မချွတ်ပါနဲ့လားကိုရယ်….ဖူးမနေတတ်လို့ပါ”မောင်မောင်မျိုးက ဘာမှမပြောဘဲ မကြောက်ပါနဲ့ဟူသောနှစ်သိမ့်အပြုံးလေးနှင့် ဖူးဖူးလက်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်သည်။ ခုချိန်မှာအပြောထက်အလုပ်က ပိုအရေးကြီးတာလောက်ကတော့ သူသိသည်။ အဖြူရောင်ဘရာလေးကွာကျပြီးနောက် ဖူးဖူး၏ အိစက်ထွားကျိုင်းသော ရင်သားများကို အားရပါးရကိုင်မည် အပြု…သူ့လက်တွေလေထဲခန တန့်သွားရသည်။ “အဲ…”ခုနက၀တ်ထားသောဘရာနှင့်မနိုင့်တနိုင်ဖြစ်ကာအကွဲကြောင်းလေးပင်ပေါ်နေသောရင်သားထွားထွားများက မျက်လှည့်ပြလိုက်သလို သူ့မြင်ကွင်းမှပျောက်သွားသောကြောင့်ပင်။ သူမြင်နေရသည်က ကြက်ဥ ဟတ်ဖရိုက်ကြော် မရှိတရှိလောက်အနေအထားဖြင့် ခပ်ပြားပြားရင်သားများ………။ ဘာကြောင့်မှန်း နားမလည်နိုင်သော်လည်း ဖူးဖူးမရိပ်မိခင် ထိုရင်သားပြားချပ်ချပ်လေးတွေကိုပဲ ဆုပ်လိုက် နယ်လိုက် စို့လိုက်သည်။
“အီး…ဖူးမနေတတ်တော့ဘူးကိုရဲ့”ဖူးဖူက သူ့အောက်မှာအငြိမ်မနေ ဟိုဒီယိမ်းထိုးနေသဖြင့် လက်ထဲမှ ရင်သားပြားပြားလေးများကိုပင် သူလိုက်ဖမ်းရခက်နေသည်။ သူစိတ်လျှော့လိုက်ပြီး ထဘီကိုအမြန်ဆုံးနည်းနှင့်ချွတ်လိုက်သည်။ “အင်…ဘလိုကြီးလဲ”ဖူးဖူး၏ထဘီအောက်မှ ပန်တီပေါ်ထွက်လာသောအခါ မောင်မောင်မျိုး သတိလက်လွတ်ရေရွတ်မိခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမြင်ဖူးသောအမျိုးသမီးပန်တီများနှင့်မတူ တမူထူးခြားကာ ဗိုက်အထိဖုံးနေသော ဘောင်းဘီတိုလေးကို မြင်လိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ဟီး…” သူ့ရေရွတ်သံကိုကြားလိုက်သောဖူးဖူးက ဟီးကနဲတချက်ရယ်ကာ ရှက်တတ်တတ်လေးဖြစ်နေပြီးမှ သူ့ကိုရှင်းပြသည်။ “ဗိုက်ချပ်ဘောင်းဘီလေ ကိုရဲ့…ဖူးကဗိုက်ခေါက်နဲနဲထွက်နေလို့ ၀တ်ရတာ..” “အော်…ဒီလိုကိုး..” ဟုရေရွတ်ကာ ဖူးဖူးဘောင်းဘီကို မောင်မောင်မျိုးဆွဲချွတ်ရန်ကြိုးစားလိုက်သည်။ ပန်တီဘောင်းဘီအသေးတွေလောက်မလွယ်..တော်တော်လေးကျပ်နေလို့ မနည်းကြိုးစားကာချွတ်လိုက်ရသည်။အောက်ဘက်မှာတော့ မဲနက်နက်ချုံပုတ်လေးအောက်မှာပုန်းနေသော မောင်မောင်မျိုး၏ခရီးဆုံးမှတ်တိုင်လေး။ အချိန်မဆိုင်းပဲ ရှေ့တော်ပြေးလက်ငါးကြောင်းကို အရင်လွှတ်ကာ ရွှေလမ်းငွေလမ်းဖောက်လိုက်သည်။ ဖူးဖူး၏ မှတ်တိုင်လေးကလည်း မိုးဖွဲဖွဲရွာသလို စိုစိစိဖြစ်လာသည်နှင့် မောင်မောင်မျိုးဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် ဘောက်ဆာကို အမြန်ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ခပ်ကုတ်ကုတ်ထွက်လာသော သူ့ ဖွားဖက်တော်ကို ကြည့်ကာ မလုံမလဲဖြစ်မိသောကြောင့် ဖူးဖူးမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူ့လက်ချောင်းများအစွမ်းကြောင့် မိန်းမောနေပုံရသော ဖူးဖူးမျက်နှာလေးမှာ ထူးခြားသော အရိပ်အယောင်မရှိပေ။ ဖူးဖူ၏ မှတ်တိုင်လေးအတွင်းသို့ သူ့ဖွားဖက်တော်ကို ဖြေးဖြေးချင်းလိုက်ပို့လိုက်သည်။ ဖူးဖူး၏မှတ်တိုင်လေးကား အသစ်စက်စက်လို့တော့ မောင်မောင်မျိုးမထင်။ ခရီးသွားတော့ ရှိခဲ့ဖူးပုံရသည်။
သို့သော် အရမ်းတင်းကျပ်မနေသည်မှလွဲရွေ့ အကောင်ခပ်သေးသေး သူ့ဖွားဖက်တော်ကို ဖူးဖူး၏ ကိုယ်အတွင်းပိုင်းက ခပ်စေးစေးလေးပင် ရစ်ပတ် ကြိုဆိုလိုက်သည်။ မောင်မောင်မျိုးတစ်ယောက်ဖူးဖူး၏ အော်ဟစ်ညည်းညူခြင်းမရှိသော်လည်း နှုတ်ခမ်းကိုက်ကာ အံကြိတ်ရင်း မျက်လုံးမှိတ်ထားသော မျက်နှာလှလှလေးကို အာရုံစိုက်ကြည့်ရင်း အသွင်းအထုတ်ကို အရှိန်တင်ကာ နှစ်ဆတိုးကြိုးစားလိုက်သည်။ ဘယ်လောက်မှ မကြာသောအချိန်အတွင်းမှာပင် သူ၏သုတ်ရေများကို ဖူးဖူးကိုယ်တွင်းသို့အောင်မြင်စွာ အရောက်ပို့ပေးနိုင် လိုက်ပြီ ဖြစ်လေသည်။ “ဟူးးး…ကောင်းလိုက်တာဖူးရယ်….” “ဟင့်..ရှက်စရာတွေမပြောနဲ့တော့…ဖူး တွိုင်းလက်သွားမလို့ ကိုယ်ပေါ်ကဖယ်အုံး…” ဖူးဖူး၏မျက်နှာအနှံ့ကိုနမ်းရင်း အုပ်မိုးထားသောမောင်မောင်မျိုးကို တွန်းထုတ်ကာ ဟိုတယ်မှပေးသော တဘက်အကြီးကိုကိုယ်ပေါ်မှာမခို့တရို့ပတ်ရင်း ရေချိုးခန်းသို့ဝင်သွားသောဖူးဖူးကို မောင်မောင်မျိုး ကျေနပ်ပြုံးနှင့်ကြည့်နေမိသည်။ ပြီးမှ တစ်စုံတစ်ခုကိုသတိရကာ ရေချိုးခန်းထဲသို့လိုက်သွားပြီး မီးကိုရုတ်တရက်ဖွင့်လိုက်သည်။ “အို…ဘာလာလုပ်တာလဲ” မောင်မောင်မျိုးလိုက်လာမည် မထင်သောဖူးဖူးက တဘက်ကိုချွတ်ပြီး ရေပိုက်ခေါင်းလေးကို ကိုင်ရင်း ကိုယ်ကို သန့်စင်နေသည်နှင့် တည့်တည့်တိုးလေသည်။ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကိုယ်လုံးတီးလေးနှင့် ရှေ့ဖုံးရမလို နောက်ကွယ်ရမလိုလုပ်နေသော ဖူးဖူး၏အ၀တ်ဗလာခန္ဓာကိုယ်ကိုမောင်မောင်မျိုးစူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်လိုက်သည်။
သူခုနကမျက်စိများမှောက်သလားသိချင်လို့ဖြစ်သည်။ တစ်တုံးတစ်ခဲကြီးဟု သူထင်ခဲ့သော ရွှေရင်နှစ်မွှာက ခုနကအတိုင်း ခပ်သေးသေး သာမာန်ဆိုဒ်လောက်ပင်ရှိမည်။ အကျီဝတ်ထားတုန်းက ချပ်ရပ်နေသော ဗိုက်သားလေးကအခုတော့ ခပ်စူစူလေးထွက်နေသည်။ တင်ပါးလေးကလည်း ကားတော့ကားပါသည်။ ဘေးကိုအနည်းငယ်ကားပေမဲ့ နောက်ကကြည့်တော့ ခပ်ပြားပြားပင်။ သူများ မျက်စိအမြင်တွေအားနည်းနေပြီလား တွေးမိသော်လည်း အခြားသောယောက်ျားလေးများသည်လည်း သူ့နည်းလည်းကောင်း မေမီဖူးဖူးကို သွားရေကျခဲ့ကြတာ သူသိနေသည်။ သူနားမလည်နိုင်သော ကိစ္စများကို ဘယ်လိုမေးရမလဲစဉ်းစားနေတုန်း ဖူးဖူး၏လေသံခပ်တင်းတင်းက ထွက်လာသည်။ “ကို့….ဘာလာကြည့်နေတာလဲလို့မေးနေတယ်လေ” “အော်..ဟိုဒင်း..ရှူး..ရှူးပေါက်မလို့ပါ” “အဲ့ဒါဆိုလည်းပေါက်လေ ဘာကိစ္စသူများကိုရပ်ကြည့်နေရတာလဲ” “ဟီး…ဖူးကလှလို့…” သူ့အပြောကို ဖူးဖူးက မယုံသလို မျက်စောင်းထိုးကာ ရေချိုးခန်းထဲမှထွက်သွား၏။ မတတ်နိုင်…သူမုသားပြောလိုက်ရပြီ။ သူ့စိတ်ထဲရှိတာတွေ အမှန်အတိုင်းပြောလိုက်ရင် ဟီရူရှီးမားအနုမြူဗုံးထက် ဆိုးသွားမှာ အသေအချာပင်။ သူ့အနေနှင့် ဖူးဖူးကို အပြစ်မြင်ကဲ့ရဲ့လိုခြင်းမဟုတ်။ အ၀တ်အစားဝတ်ထားခြင်းနှင့် ၀တ်မထားခြင်းကြားတွင် အတော်ကွာခြားသွားပုံကို သူနားမလည်နိုင်လို့သာ ဖြစ်သည်။ ရောက်လက်စနဲ့ ပေါက်စရာရှိတာပေါက်ရင်း ပြန်ထွက်လာတော့ ဖူးဖူးက တဘက်လေး သေချာပတ်ကာ အိပ်ယာပေါ်ဝယ် ငုတ်တုတ်လေးခြေချထိုင်နေသည်။
“ဖူးလေး…””……..”“ဟင်…မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား….ဘာဖစ်လဲ ကို့ကိုပြောစမ်း”ပြိုတော့မည့်မိုးနှယ် မျက်ရည်များဝဲကာ လက်ချင်းဆုပ်နယ်ပြီးထိုင်နေသော ဖူးဖူး မျက်နှာကိုမြင်တော့ မောင်မောင်မျိုးပြာသွားသည်။ သူချော့မော့မေးသော်လည်း ဖူးဖူးကမပြော။ ချော့ကာမှ ပိုဆိုးလာသလား မှတ်ရကာ မျက်ရည်များသွင်သွင်စီးကျလာသည်။ နောက်ဆုံးမောင်မောင်မျိုးတတွတ်တွတ်ပြောကာ မေးလွန်းမက မေးမှ ရှိုက်သံတဟင့်ဟင့်နှင့်အတူ…..“ဖူး…ဖူးကအပျိုမဟုတ်တာ ကိုသိတယ်မဟုတ်လား…” “အာ……ဘာများလဲလို့…ဒါများဖူးရယ်….အပျိုမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲ…” “အဲဒါတင်မကသေးဘူး……..ကို့မျက်လုံးတွေကိုဖူးသိပါတယ်……ဖူးကိုအားလုံးက လှလှပပလေးထင်ထားကြတာ……. မျက်နှာကလည်း မိတ်ကပ်တွေလိမ်းထားလို့သာ ကြည့်ကောင်းတာ… မျက်လုံးကလည်း မျက်ကပ်မှန်တပ်ထားတာ…. တကယ်တမ်းကျ ဖူးက အပြင်အဆင်တွေ အခုအခံတွေပါမှ လှတာ….အခု အကုန် ချွတ်လိုက်တော့ စိတ်ပျက်စရာကြီးမဟုတ်လား..”မောင်မောင်မျိုးသက်ပြင်းချလိုက်သည်။ သူတွေးနေသောကိစ္စ ဖူးဖူးက ပြောလာလေပြီ။ “မဟုတ်ပါဘူး ဖူးရယ်…..ကိုယ်က တခါမှမမြင်ဖူးလို့နဲနဲအံ့သြသွားတာပါ…ဒီလိုတွေလုပ်ရတယ်မှန်း မသိလို့လေ….” “ ဟုတ်တယ်…အဲဒါ တွန်းတင်ဘရာ လို့ခေါ်တယ်…ရင်သားမရှိတဲ့သူတောင် ၀တ်လိုက်ရင် ကြီးသွားသလိုထင်ရတာ……ဗိုက်ကလည်းပူနေလို့ ဗိုက်ချပ်ဘောင်းဘီဝတ်ထားရတယ်….ထဘီကိုလည်း ဒေါက်ပါတာဝတ်မှ….. တင်ပြားနေတာမသိသာအောင် ထဘီကိုဒေါက်သေချာထည့်ချုပ်ပီး ၀တ်ရတာ… ကိုအခုသိပြီလား….အဟင့်”“သိပြီ သိပြီ…..ဟားဟားးး”မောင်မောင်မျိုးတစ်ယောက် တွက်မရသော ပုစ္ဆာတပုဒ်အဖြေရသွားသည့်နှယ်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ဖူးဖူးကို ထဖက်လိုက်သည်။
ဖူးဖူးက အတင်းရုန်းထွက်ပြီး သူ့ကိုများလှောင်နေသလားဟူသော မျက်မှောင်ကျုတ် အကြည့်ကို မောင်မောင်မျိုးက လက်ကာခါ…..“ဒီမယ် ဖူး….ကိုယ်က နားမလည်လို့သိချင်တာပဲရှိတာ…အခုသိတော့ကောဘာဖြစ်လဲ…ဖူးက ကိုယ့်ချစ်သူပဲ.. ဖူးအပျိုမဟုတ်တာကော ဘာအရေးလဲ……ကိုယ့်ကိုဖူးချစ်ရင်ကျေနပ်တယ်….ဒီလိုကိုယ်လုံးရှိတာလည်း ဘာဖြစ်လဲ….ကိုယ့်အတွက်ဖူးက လှနေပြီးသားပဲ…ကိုယ်ကသာ ကိုယ့်လိုပုံမလာပန်းမလာလူမျိုးကို ဖူးကပြန်ချစ်လို့ ၀မ်းသာနေရတာ… ဒါမျိုးတွေတွေးပြီးဝမ်းနည်းမနေနဲ့ကြားလား….အရင်လို လှလှပပလေးပဲနေ…ကိုယ်ချစ်ရင်ပီးတာပဲမဟုတ်လား…” “ဒါ..ဒါပေမဲ့..ကိုက ဖူးကို လှလို့ချစ်တာမဟုတ်ဖူးလား…”မောင်မောင်မျိုးသက်ပြင်းထပ်ချရပြန်သည်။ သူဖူးဖူးကိုလှလို့ချစ်ခဲ့ကြောင်းမငြင်းနိုင်ပါ။ အခုကျတော့ရော… သူစိတ်ထဲဘာမှမဖြစ်..ဘယ်လိုမှမနေ…ခါတိုင်းလိုပဲဖူးဖူးကိုသူချစ်သည်။ ဖူးဖူးသည် သူ့ဖူးစာဖက် ဖြစ်ရမည်ဟု ယုံကြည်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ လက်ထပ်ဖို့အထိတောင်ရည်ရွယ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ ဖူးဖူး၏၀မ်းနည်းတ၀က်အားငယ်စိတ်တစ်ဝက်နှင့် မျက်နှာလေးကို သူစိုက်ကြည့်ရင်းခေါင်းခါပြလိုက်သည်။ “ဟင့်အင်း….ကို့ဖူးစာဖက်မို့လို့ချစ်တာ..သိလား..ဖူးကကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာဖက်…” မိုးရွာပြီး နေပြန်ထွက်လာကာစကောင်းကင်တွင် တိမ်ညိုမည်းများလွင့်စင်ပြေးထွက်ကုန်သလို ဖူးဖူးမျက်နှာလေး ပြုံးကာ ၀င်းပသွားရတော့သည်။ ။ ပြီးပါပြီ………….
မောငျမောငျမြိုးတဈယောကျတျောတျောပြျောနသေညျ။အခုခြိနျတှငျ ကမ်ဘာပျေါမှာ စိတျအခမျြးသာဆုံးလူစာရငျး ကောကျလိုကျရငျ သူထိပျဆုံးနားလေးကပငျ ပါလာနိုငျသညျ။ တကယျပေါကျရငျတောငျ အိမျတဈလုံးဝယျလို့ မရနိုငျတဲ့ အောငျဘာလေ သိနျး၁၅၀၀ ထီပေါကျတာထကျပငျပြျောနရေသညျဟု ဆိုလြှငျ လှနျအံ့မထငျ။ အကွောငျးကား သူအလှနျအမငျးစှဲလမျး ခဈြခငျရပါသော…….. ဖူးဖူး ဟုသူအမွတျတနိုးချေါဆိုအပျသော မမေီဖူးဖူး ထံမှ ခဈြအဖွေ ကို အံ့သွတကွီး လကျခံရရှိလိုကျသညျမှာ နာရီပိုငျးမြှသာရှိသေးသောကွောငျ့ပငျ။ အံ့သွတကွီး ဟူသောစာလုံးကိုရှငျးပါအုံးမညျ။ တကယျတော့ ကိုယျ့ခဈြသူ မိနျးကလေးထံမှ ခဈြအဖွေ စကားပွနျကွားရသညျမှာ ဘာမှအံ့သွလောကျစရာတော့မဟုတျ။ သို့သျော မောငျမောငျမြိုး မြှျောမှနျးခဲ့မိသော မမေီဖူးဖူးမှာ သူ့တသကျတာ မွငျဖူးသမြှထဲတှငျ….မျောဒယျ၊ မငျးသမီးတမြှ လှပသူလေးတဈယောကျဖွဈနသေောကွောငျ့ပငျ။ မောငျမောငျမြိုးကလညျး ရုပျရှိ ရလြှေံ ရှိုးကောငျးသူ တဈယောကျသာဆိုလြှငျ အံ့သွစရာကိစ်စမဟုတျသေး။ အနှီမောငျမောငျမြိုးမှာ သူလိုငါလို ရှကျကွမျးရကြေို ရုပျရညျသာပိုငျဆိုငျသညျ။ ငှရေေးကွေးရေးမှာလညျး အလကားနရေငျးသုံးနိုငျဖွုနျးနိုငျ နသေူတဈယောကျတော့မဟုတျ။ ရူပါမလို ဗြူဟာသာလိုသညျ ဆိုသော ဆရာ့ဆရာကွီးမြားလို တျောကီအလှတျတှငျ ဘျောလီကြှတျအောငျ ဆှဲဆောငျနိုငျသူတဈယောကျ မဟုတျမှနျးလညျး ကိုယျ့ကိုကိုယျ သိနပွေီးသား။
ထို့ကွောငျ့ မမေီဖူးဖူး ဟူသော လူတကာဆှတျယူခငျြသော ပနျးကလေးက မောငျမောငျမြိုးတညျးဟူသော သာမညောငျည လူတဈယောကျကို ပွနျလညျခဈြကွိုကျခွငျးမှာ ကိုယျတိုငျ မကွုံရလြှငျ ယုံနိုငျဖှယျတောငျ မရှိသော ယုံခငျြယုံ မယုံခငျြနအေဖွဈအပကျြတဈခုသာ ဖွဈနေ၏။ စငျစဈသျော ဖူးဖူးမှာ မောငျမောငျမြိုးတို့ ကြောငျး၏အလှပဂေးစာရငျးဝငျတဈဦးပငျ။ ဖူးဖူး၏ မကျြလုံးဝိုငျးဝိုငျးမကျြဆံနကျနကျလေးမြားနှငျ့ အရုပျကလေးလို လှပ နုနယျ ခဈြစဖှယျကောငျးသော မကျြနှာလေးကိုလညျးကောငျး၊ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျ ပိနျပိနျပါးပါး သာရှိသျောလညျး မွနျမာဆနျဆနျ အကြီပုံဆနျးဆနျးလေးမြားအောကျမှ မို့မောကျရုနျးကွှနသေော စနနှေဈခိုငျကိုလညျးကောငျး၊ သိမျသောခါးနှငျ့ လိုကျဖကျလှသော တငျအိုးခပျကားကား လေးကိုလညျးကောငျး ငေးကွ ဆှေးကွ သကျပွငျးခကြွသော ကြောငျးသားထုမှာ ဒုနှငျ့ဒေး ရှိခြေ၏။ ထိုမြှမကသေး ကြောငျးအပွငျ ကြူရှငျ အလာတှငျ တဈခါတရံဝတျတတျသော ရငျဘတျဟိုကျဟိုကျ ဘလောကျဈလေးမြားနှငျ့ ထဘီစကပျအတှငျးမှ လှဈခနဲပျေါပျေါလာတတျသော ခွသေလုံးသားလေးမြားကွောငျ့ အခြို့သောကြောငျးသားမြားမှာ ကြောငျးမှနျမှနျတကျကာ စာကွိုးစားကွလသေတတျ။ ထို့ကွောငျ့ပငျ မောငျမောငျမြိုးမှာ ငါလိုလူဇမ်ဘူမှာရှိသေးရဲ့လားဟု လကျခမောငျးခတျမတတျပငျ ဝမျးသာလုံးဆို့နရေခွငျးဖွဈလသေညျ။ တကယျတော့ ဖူးဖူးကို သူတိတျတခိုးခဈြနမေိသညျမှာ ကွာလှပွီ။ ဒါကွောငျ့လညျး သူငယျခငျြးဖွဈအောငျအရငျကွိုးစားကာ ဖူးဖူးအနားကပျခှငျ့ရအောငျ လုပျခဲ့သညျ။ မာနမကွီးတတျသော ဖူးဖူးက သူ့ကို သူငယျခငျြးအဖွဈအသိအမှတျပွုပါသညျ။
မောငျမောငျမြိုး၏ အားသာခကျြမြားကိုရှာကွံပွောရလြှငျ အလိုကျသိခွငျး နှငျ့ သူတပါးကို နားလညျမှုပေးနိုငျခွငျးတို့ပငျဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မောငျမောငျမြိုးမှာ ခဈြသူခငျသူ မိတျဆှမေရှား……။သူခဈြနသေောဖူးဖူးအပျေါပိုရှပေ့ငျ ဂရုတစိုကျရှိမိသောကွောငျ့ ဖူးဖူးဟူသောပနျးကလေး သူ့လကျထဲ ကွှကေလြာရခွငျးဖွဈကွောငျး သူယုံကွညျမိလသေညျ။ ခဈြသူဖွဈကာစရကျမြားတှငျ မောငျမောငျမြိုးတဈယောကျ တိမျပျေါလမျးလြှောကျနရေသလိုပငျ ပြျောရှငျလှသညျ။ တဈခြို့သောသူမြားတကာ သမီးရညျးစားတှလေို ခကျြခငျြး အခှငျ့အရေးတနျးမယူ ခဈြသူခြောခြောလေးအား လကျခငျြးခြိတျကာ နရောအနှံ့လြှောကျသှားနရေခွငျးဖွငျ့ ပငျ သူ့အခြိနျတှေ ကုနျဆုံးစခေဲ့သညျ။ ဟိုဟိုဒီဒီပနျးခွံလေးမြားထိုငျမိလြှငျ နှုတျခမျးဆိုးဆေးကွောငျ့ သဈသီးနံ့လေးသငျးနသေော ဖူးဖူး၏ နှုတျခမျးလေးမြားကို မရဲတရဲနမျးမိလိုကျလြှငျပငျ ယောကျြားသဘာဝ ဇာတျလမျးဆုံးသို့ရောကျလုမတတျ သူစိတျလှုပျရှားရသညျ။ မောငျမောငျမြိုးရညျးစားမထားဖူးဘူး မဟုတျ ထားဖူးသျောလညျး ဖူးဖူးလို ပထမတနျးစားလေးနှငျ့ ခဈြသူဖွဈရသောကွောငျ့ သူမိုးမမွငျလမေမွငျဖွဈမိခွငျးသာ ဖွဈသညျ။ရညျးစားဖွဈပွီး အတျောလေးကွာတော့ မောငျမောငျမြိုးအခကျအခဲတဈခုနှငျ့ ကွုံရသညျ။ ဖူးဖူးကို ကွှရေုပျလေးလို အလှထိုငျကွညျ့နသေော သူ့အားသူငယျခငျြးအပေါငျးအဖျောမြားက အဆငျ့တကျဖို့ ၀ိုငျးဝနျးမွှောကျပေးကွသညျ။
သူကမိနျးကလေးတဈယောကျအတှကျအခြိနျလိုတယျ ဘာညာနှငျ့ ဖောရှော ပွောထားပမေဲ့ တကယျတမျး အဆငျသငျ့မဖွဈသေးတာ သူပငျ။ ဒီလောကျလှသော ဖူးဖူးကို သူမအုပျခငျြလို့မဟုတျ၊ ဖူးဖူး၏ အတှငျးကသြောခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးမြားကို မမွငျခငျြလို့မဟုတျပေ။ အပွနျအလှနျအနဖွေငျ့ သူ၏ အတှငျးပစ်စညျးမြားကို ပွသရနျ ရှကျနမေိခွငျးသာဖွဈသညျ။ တဈခွားယောကျြားသားတို့ ဒါမြိုးစဉျးစားခငျြမှစဉျးစားမညျဖွဈသောလညျး မောငျမောငျမြိုးက အတှေးလှနျတတျသညျ။ သူ၏ တီရှပျပှပှထူထူမြားဖွငျ့ မသိသာအောငျဖုံးထားသော နံရိုးပွိုငျးပွိုငျး ဘျောဒီကိုလညျးကောငျး၊ မဲနသေောဖငျရှုံ့ရှုံ့လေးအားလညျးကောငျး၊ ယုတျစှအဆုံး မိနျးမကိစ်စတှငျတောငျ “တို့ကတော့ ရုပျကို မကွညျ့နဲ့ -ီး လာကွညျ့ တသကျစှဲသှားစရေမယျ” ဆိုသော ဟုတျလားမဟုတျလားတော့မသိ…သူကွားခဲ့ဖူးသော ကွိမျးဝါးသံမြားလို လကျမထောငျနိုငျသူတဈယောကျ ဖွဈဖို့နနေသောသာ လူစဉျမှီရုံလောကျသာ ရှိသော သူ့ဖှားဖကျတျောအားလညျးကောငျး…ဖူးဖူးသာမွငျသှား ရငျ စိတျပကျြသှားမှာပဲဟု သူတှေးရငျး ရှကျနမေိသောကွာငျ့ သူတို့အခဈြရေးကို ရှဆေ့ကျမတိုးမိခွငျးသာ ဖွဈလေ၏။ ထိုသို့အရှကျသညျးသော မောငျမောငျမြိုးစဉျးစားထားသညျက လကျထပျပွီးမှဆိုလြှငျ ဖူးဖူးတဈယောကျ ရှေးခယျြစရာမရှိသောကွောငျ့ ပိုအဆငျပွမေညျဟု…။
သို့သျော သူငယျခငျြးမြားက “မငျ့မေ သောကျခှေး ဟိုက မငျ့အတညျယူမယျဘယျသူပွောတုနျး….. ခုလိုရညျးစားဖွဈရတုနျး အခှငျ့သာခိုကျမှ မအုပျခငျြလြှငျ ဘာညာသာရကာ နကွောကှာစိ” စသဖွငျ့ ပှားလှနျးမက ပှားကွလသေျော မောငျမောငျမြိုးကိုယျတိုငျ စိတျပါလာတော့သညျ။ ဖွဈခငျြရာဖွဈကှာ ဆိုပွီး ဖူးဖူးအား ပူဆာမိတော့သညျ။ “ဖူးရယျ…ကိုယျတို့လှတျလှတျလပျလပျတှရေ့ရငျကောငျးမယျကှာ” “ခုလညျးတှနေ့ရေတာပဲကို ကိုရယျ…… ဘယျသူတှကေလိုကျနှောကျယှကျနလေို့တုနျး”“မဟုတျဘူးလေ……..နှဈယောကျထဲ တနရောမှာ စကားအေးဆေးပွောခငျြတာကို ပွောတာ ဘယျသူမှမရှိတဲ့နရောကှာ ““အမယျ…မသိရငျခကျမယျ…….စကားပွောခငျြတာက နဲနဲ…ဟှနျး” “ဟီး…ခဈြလှနျးလို့ပါဖူးလေးရယျ……ဖူးကကိုယျ့ကိုမခဈြဘူးလားပွော……..” ထိုသို့တတျသမြှမှတျသမြှ နညျးမြားဖွငျ့ ခြုပျလသေောအခါ ဖူးဖူးလညျး မလိုကျခငျြသလိုလိုကျခငျြသလို နှငျ့ ဟိုတယျအခနျးလေးတဈခုထဲသို့ပါလာရလတေော့သညျ။ အဖွူရောငျ ရငျစအေ့ကြီ၊ အဖွူနှငျ့ မီးခိုးအပှငျ့လေးမြားရောစပျထားသော ထဘီနှငျ့ လှခငျြတိုငျးလှနသေော ဖူးဖူးတဈကိုယျလုံးအား မောငျမောငျမြိုး သိမျးကြုံးကွညျ့လိုကျသညျ။ ဖူးဖူးက ရှကျသှေးဖွာသောမကျြနှာလေးနှငျ့ ခေါငျးကိုငုံ့လိုကျစဉျ မောငျမောငျမြိုးက ခေါငျးအငုံမခံဘဲ လကျဖွငျ့ ဆှဲယူကာ အနမျးမြားကွာရှညျစှာပေးလိုကျလသေညျ။
“အိ……အူးးးး….ဟူး…မောလိုကျတာကိုရာ….”ဖူးဖူး၏ပနျးသှေးရောငျနှုတျခမျးလေးမြားကိုလှတျပွီး လညျတိုငျကြော့ကြော့ကို အနမျးခွှလေိုကျစဉျ ဖူးဖူးထံမှ ညညျးသံလေးမြားထှကျလာခွငျးဖွဈသညျ။ အကြီကွယျသီးလေးမြားကို တဈခုခငျြး ညငျသာစှာ ဖွူတျလိုကျပွီးနောကျ ပျေါထှကျလာသောဘရာအဖွူရောငျလေးကို ခြှတျမညျလုပျတော့ ဖူးဖူးက အခြှတျမခံဘဲ လကျနှငျ့ဖိအုပျထားသညျ။ “မခြှတျပါနဲ့လားကိုရယျ….ဖူးမနတေတျလို့ပါ”မောငျမောငျမြိုးက ဘာမှမပွောဘဲ မကွောကျပါနဲ့ဟူသောနှဈသိမျ့အပွုံးလေးနှငျ့ ဖူးဖူးလကျတှကေိုဖယျရှားလိုကျသညျ။ ခုခြိနျမှာအပွောထကျအလုပျက ပိုအရေးကွီးတာလောကျကတော့ သူသိသညျ။ အဖွူရောငျဘရာလေးကှာကပြွီးနောကျ ဖူးဖူး၏ အိစကျထှားကြိုငျးသော ရငျသားမြားကို အားရပါးရကိုငျမညျ အပွု…သူ့လကျတှလေထေဲခန တနျ့သှားရသညျ။ “အဲ…”ခုနကဝတျထားသောဘရာနှငျ့မနိုငျ့တနိုငျဖွဈကာအကှဲကွောငျးလေးပငျပျေါနသေောရငျသားထှားထှားမြားက မကျြလှညျ့ပွလိုကျသလို သူ့မွငျကှငျးမှပြောကျသှားသောကွောငျ့ပငျ။ သူမွငျနရေသညျက ကွကျဥ ဟတျဖရိုကျကွျော မရှိတရှိလောကျအနအေထားဖွငျ့ ခပျပွားပွားရငျသားမြား………။ ဘာကွောငျ့မှနျး နားမလညျနိုငျသျောလညျး ဖူးဖူးမရိပျမိခငျ ထိုရငျသားပွားခပျြခပျြလေးတှကေိုပဲ ဆုပျလိုကျ နယျလိုကျ စို့လိုကျသညျ။
“အီး…ဖူးမနတေတျတော့ဘူးကိုရဲ့”ဖူးဖူက သူ့အောကျမှာအငွိမျမနေ ဟိုဒီယိမျးထိုးနသေဖွငျ့ လကျထဲမှ ရငျသားပွားပွားလေးမြားကိုပငျ သူလိုကျဖမျးရခကျနသေညျ။ သူစိတျလြှော့လိုကျပွီး ထဘီကိုအမွနျဆုံးနညျးနှငျ့ခြှတျလိုကျသညျ။ “အငျ…ဘလိုကွီးလဲ”ဖူးဖူး၏ထဘီအောကျမှ ပနျတီပျေါထှကျလာသောအခါ မောငျမောငျမြိုး သတိလကျလှတျရရှေတျမိခွငျး ဖွဈသညျ။ သူမွငျဖူးသောအမြိုးသမီးပနျတီမြားနှငျ့မတူ တမူထူးခွားကာ ဗိုကျအထိဖုံးနသေော ဘောငျးဘီတိုလေးကို မွငျလိုကျရသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။ “ဟီး…” သူ့ရရှေတျသံကိုကွားလိုကျသောဖူးဖူးက ဟီးကနဲတခကျြရယျကာ ရှကျတတျတတျလေးဖွဈနပွေီးမှ သူ့ကိုရှငျးပွသညျ။ “ဗိုကျခပျြဘောငျးဘီလေ ကိုရဲ့…ဖူးကဗိုကျခေါကျနဲနဲထှကျနလေို့ ဝတျရတာ..” “အျော…ဒီလိုကိုး..” ဟုရရှေတျကာ ဖူးဖူးဘောငျးဘီကို မောငျမောငျမြိုးဆှဲခြှတျရနျကွိုးစားလိုကျသညျ။ ပနျတီဘောငျးဘီအသေးတှလေောကျမလှယျ..တျောတျောလေးကပျြနလေို့ မနညျးကွိုးစားကာခြှတျလိုကျရသညျ။အောကျဘကျမှာတော့ မဲနကျနကျခြုံပုတျလေးအောကျမှာပုနျးနသေော မောငျမောငျမြိုး၏ခရီးဆုံးမှတျတိုငျလေး။ အခြိနျမဆိုငျးပဲ ရှတေ့ျောပွေးလကျငါးကွောငျးကို အရငျလှတျကာ ရှလေမျးငှလေမျးဖောကျလိုကျသညျ။ ဖူးဖူး၏ မှတျတိုငျလေးကလညျး မိုးဖှဲဖှဲရှာသလို စိုစိစိဖွဈလာသညျနှငျ့ မောငျမောငျမြိုးဂငျြးဘောငျးဘီနှငျ့ ဘောကျဆာကို အမွနျဆှဲခြှတျလိုကျသညျ။ ခပျကုတျကုတျထှကျလာသော သူ့ ဖှားဖကျတျောကို ကွညျ့ကာ မလုံမလဲဖွဈမိသောကွောငျ့ ဖူးဖူးမကျြနှာကိုလှမျးကွညျ့လိုကျတော့ သူ့လကျခြောငျးမြားအစှမျးကွောငျ့ မိနျးမောနပေုံရသော ဖူးဖူးမကျြနှာလေးမှာ ထူးခွားသော အရိပျအယောငျမရှိပေ။ ဖူးဖူ၏ မှတျတိုငျလေးအတှငျးသို့ သူ့ဖှားဖကျတျောကို ဖွေးဖွေးခငျြးလိုကျပို့လိုကျသညျ။ ဖူးဖူး၏မှတျတိုငျလေးကား အသဈစကျစကျလို့တော့ မောငျမောငျမြိုးမထငျ။ ခရီးသှားတော့ ရှိခဲ့ဖူးပုံရသညျ။
သို့သျော အရမျးတငျးကပျြမနသေညျမှလှဲရှေ့ အကောငျခပျသေးသေး သူ့ဖှားဖကျတျောကို ဖူးဖူး၏ ကိုယျအတှငျးပိုငျးက ခပျစေးစေးလေးပငျ ရဈပတျ ကွိုဆိုလိုကျသညျ။ မောငျမောငျမြိုးတဈယောကျဖူးဖူး၏ အျောဟဈညညျးညူခွငျးမရှိသျောလညျး နှုတျခမျးကိုကျကာ အံကွိတျရငျး မကျြလုံးမှိတျထားသော မကျြနှာလှလှလေးကို အာရုံစိုကျကွညျ့ရငျး အသှငျးအထုတျကို အရှိနျတငျကာ နှဈဆတိုးကွိုးစားလိုကျသညျ။ ဘယျလောကျမှ မကွာသောအခြိနျအတှငျးမှာပငျ သူ၏သုတျရမြေားကို ဖူးဖူးကိုယျတှငျးသို့အောငျမွငျစှာ အရောကျပို့ပေးနိုငျ လိုကျပွီ ဖွဈလသေညျ။ “ဟူးးး…ကောငျးလိုကျတာဖူးရယျ….” “ဟငျ့..ရှကျစရာတှမေပွောနဲ့တော့…ဖူး တှိုငျးလကျသှားမလို့ ကိုယျပျေါကဖယျအုံး…” ဖူးဖူး၏မကျြနှာအနှံ့ကိုနမျးရငျး အုပျမိုးထားသောမောငျမောငျမြိုးကို တှနျးထုတျကာ ဟိုတယျမှပေးသော တဘကျအကွီးကိုကိုယျပျေါမှာမခို့တရို့ပတျရငျး ရခြေိုးခနျးသို့ဝငျသှားသောဖူးဖူးကို မောငျမောငျမြိုး ကနြေပျပွုံးနှငျ့ကွညျ့နမေိသညျ။ ပွီးမှ တဈစုံတဈခုကိုသတိရကာ ရခြေိုးခနျးထဲသို့လိုကျသှားပွီး မီးကိုရုတျတရကျဖှငျ့လိုကျသညျ။ “အို…ဘာလာလုပျတာလဲ” မောငျမောငျမြိုးလိုကျလာမညျ မထငျသောဖူးဖူးက တဘကျကိုခြှတျပွီး ရပေိုကျခေါငျးလေးကို ကိုငျရငျး ကိုယျကို သနျ့စငျနသေညျနှငျ့ တညျ့တညျ့တိုးလသေညျ။ မတျတပျရပျပွီး ကိုယျလုံးတီးလေးနှငျ့ ရှဖေုံ့းရမလို နောကျကှယျရမလိုလုပျနသေော ဖူးဖူး၏အဝတျဗလာခန်ဓာကိုယျကိုမောငျမောငျမြိုးစူးစူးစိုကျစိုကျ ကွညျ့လိုကျသညျ။
သူခုနကမကျြစိမြားမှောကျသလားသိခငျြလို့ဖွဈသညျ။ တဈတုံးတဈခဲကွီးဟု သူထငျခဲ့သော ရှရေငျနှဈမှာက ခုနကအတိုငျး ခပျသေးသေး သာမာနျဆိုဒျလောကျပငျရှိမညျ။ အကြီဝတျထားတုနျးက ခပျြရပျနသေော ဗိုကျသားလေးကအခုတော့ ခပျစူစူလေးထှကျနသေညျ။ တငျပါးလေးကလညျး ကားတော့ကားပါသညျ။ ဘေးကိုအနညျးငယျကားပမေဲ့ နောကျကကွညျ့တော့ ခပျပွားပွားပငျ။ သူမြား မကျြစိအမွငျတှအေားနညျးနပွေီလား တှေးမိသျောလညျး အခွားသောယောကျြားလေးမြားသညျလညျး သူ့နညျးလညျးကောငျး မမေီဖူးဖူးကို သှားရကေခြဲ့ကွတာ သူသိနသေညျ။ သူနားမလညျနိုငျသော ကိစ်စမြားကို ဘယျလိုမေးရမလဲစဉျးစားနတေုနျး ဖူးဖူး၏လသေံခပျတငျးတငျးက ထှကျလာသညျ။ “ကို့….ဘာလာကွညျ့နတောလဲလို့မေးနတေယျလေ” “အျော..ဟိုဒငျး..ရှူး..ရှူးပေါကျမလို့ပါ” “အဲ့ဒါဆိုလညျးပေါကျလေ ဘာကိစ်စသူမြားကိုရပျကွညျ့နရေတာလဲ” “ဟီး…ဖူးကလှလို့…” သူ့အပွောကို ဖူးဖူးက မယုံသလို မကျြစောငျးထိုးကာ ရခြေိုးခနျးထဲမှထှကျသှား၏။ မတတျနိုငျ…သူမုသားပွောလိုကျရပွီ။ သူ့စိတျထဲရှိတာတှေ အမှနျအတိုငျးပွောလိုကျရငျ ဟီရူရှီးမားအနုမွူဗုံးထကျ ဆိုးသှားမှာ အသအေခြာပငျ။ သူ့အနနှေငျ့ ဖူးဖူးကို အပွဈမွငျကဲ့ရဲ့လိုခွငျးမဟုတျ။ အဝတျအစားဝတျထားခွငျးနှငျ့ ဝတျမထားခွငျးကွားတှငျ အတျောကှာခွားသှားပုံကို သူနားမလညျနိုငျလို့သာ ဖွဈသညျ။ ရောကျလကျစနဲ့ ပေါကျစရာရှိတာပေါကျရငျး ပွနျထှကျလာတော့ ဖူးဖူးက တဘကျလေး သခြောပတျကာ အိပျယာပျေါဝယျ ငုတျတုတျလေးခွခေထြိုငျနသေညျ။
“ဖူးလေး…””……..”“ဟငျ…မကျြနှာလညျးမကောငျးပါလား….ဘာဖဈလဲ ကို့ကိုပွောစမျး”ပွိုတော့မညျ့မိုးနှယျ မကျြရညျမြားဝဲကာ လကျခငျြးဆုပျနယျပွီးထိုငျနသေော ဖူးဖူး မကျြနှာကိုမွငျတော့ မောငျမောငျမြိုးပွာသှားသညျ။ သူခြော့မော့မေးသျောလညျး ဖူးဖူးကမပွော။ ခြော့ကာမှ ပိုဆိုးလာသလား မှတျရကာ မကျြရညျမြားသှငျသှငျစီးကလြာသညျ။ နောကျဆုံးမောငျမောငျမြိုးတတှတျတှတျပွောကာ မေးလှနျးမက မေးမှ ရှိုကျသံတဟငျ့ဟငျ့နှငျ့အတူ…..“ဖူး…ဖူးကအပြိုမဟုတျတာ ကိုသိတယျမဟုတျလား…” “အာ……ဘာမြားလဲလို့…ဒါမြားဖူးရယျ….အပြိုမဟုတျတော့ဘာဖွဈလဲ…” “အဲဒါတငျမကသေးဘူး……..ကို့မကျြလုံးတှကေိုဖူးသိပါတယျ……ဖူးကိုအားလုံးက လှလှပပလေးထငျထားကွတာ……. မကျြနှာကလညျး မိတျကပျတှလေိမျးထားလို့သာ ကွညျ့ကောငျးတာ… မကျြလုံးကလညျး မကျြကပျမှနျတပျထားတာ…. တကယျတမျးကြ ဖူးက အပွငျအဆငျတှေ အခုအခံတှပေါမှ လှတာ….အခု အကုနျ ခြှတျလိုကျတော့ စိတျပကျြစရာကွီးမဟုတျလား..”မောငျမောငျမြိုးသကျပွငျးခလြိုကျသညျ။ သူတှေးနသေောကိစ်စ ဖူးဖူးက ပွောလာလပွေီ။ “မဟုတျပါဘူး ဖူးရယျ…..ကိုယျက တခါမှမမွငျဖူးလို့နဲနဲအံ့သွသှားတာပါ…ဒီလိုတှလေုပျရတယျမှနျး မသိလို့လေ….” “ ဟုတျတယျ…အဲဒါ တှနျးတငျဘရာ လို့ချေါတယျ…ရငျသားမရှိတဲ့သူတောငျ ဝတျလိုကျရငျ ကွီးသှားသလိုထငျရတာ……ဗိုကျကလညျးပူနလေို့ ဗိုကျခပျြဘောငျးဘီဝတျထားရတယျ….ထဘီကိုလညျး ဒေါကျပါတာဝတျမှ….. တငျပွားနတောမသိသာအောငျ ထဘီကိုဒေါကျသခြောထညျ့ခြုပျပီး ဝတျရတာ… ကိုအခုသိပွီလား….အဟငျ့”“သိပွီ သိပွီ…..ဟားဟားးး”မောငျမောငျမြိုးတဈယောကျ တှကျမရသော ပုစ်ဆာတပုဒျအဖွရေသှားသညျ့နှယျပြျောရှငျစှာဖွငျ့ ဖူးဖူးကို ထဖကျလိုကျသညျ။
ဖူးဖူးက အတငျးရုနျးထှကျပွီး သူ့ကိုမြားလှောငျနသေလားဟူသော မကျြမှောငျကြုတျ အကွညျ့ကို မောငျမောငျမြိုးက လကျကာခါ…..“ဒီမယျ ဖူး….ကိုယျက နားမလညျလို့သိခငျြတာပဲရှိတာ…အခုသိတော့ကောဘာဖွဈလဲ…ဖူးက ကိုယျ့ခဈြသူပဲ.. ဖူးအပြိုမဟုတျတာကော ဘာအရေးလဲ……ကိုယျ့ကိုဖူးခဈြရငျကနြေပျတယျ….ဒီလိုကိုယျလုံးရှိတာလညျး ဘာဖွဈလဲ….ကိုယျ့အတှကျဖူးက လှနပွေီးသားပဲ…ကိုယျကသာ ကိုယျ့လိုပုံမလာပနျးမလာလူမြိုးကို ဖူးကပွနျခဈြလို့ ဝမျးသာနရေတာ… ဒါမြိုးတှတှေေးပွီးဝမျးနညျးမနနေဲ့ကွားလား….အရငျလို လှလှပပလေးပဲနေ…ကိုယျခဈြရငျပီးတာပဲမဟုတျလား…” “ဒါ..ဒါပမေဲ့..ကိုက ဖူးကို လှလို့ခဈြတာမဟုတျဖူးလား…”မောငျမောငျမြိုးသကျပွငျးထပျခရြပွနျသညျ။ သူဖူးဖူးကိုလှလို့ခဈြခဲ့ကွောငျးမငွငျးနိုငျပါ။ အခုကတြော့ရော… သူစိတျထဲဘာမှမဖွဈ..ဘယျလိုမှမနေ…ခါတိုငျးလိုပဲဖူးဖူးကိုသူခဈြသညျ။ ဖူးဖူးသညျ သူ့ဖူးစာဖကျ ဖွဈရမညျဟု ယုံကွညျထားပွီး ဖွဈသညျ။ လကျထပျဖို့အထိတောငျရညျရှယျထားပွီး ဖွဈသညျ။ ဖူးဖူး၏ဝမျးနညျးတဝကျအားငယျစိတျတဈဝကျနှငျ့ မကျြနှာလေးကို သူစိုကျကွညျ့ရငျးခေါငျးခါပွလိုကျသညျ။ “ဟငျ့အငျး….ကို့ဖူးစာဖကျမို့လို့ခဈြတာ..သိလား..ဖူးကကိုယျ့ရဲ့ဖူးစာဖကျ…” မိုးရှာပွီး နပွေနျထှကျလာကာစကောငျးကငျတှငျ တိမျညိုမညျးမြားလှငျ့စငျပွေးထှကျကုနျသလို ဖူးဖူးမကျြနှာလေး ပွုံးကာ ဝငျးပသှားရတော့သညျ။ ။ ပွီးပါပွီ………….